रिया बनिन् गिप्पी
'जब म सानी थिँए मैले हिरोइन बन्ने सपना देख्थे। मलाई फिल्ममा हिरोइनको भूमिकाले सारै छुन्थ्यो। तर जब म अलि ठूली हुँदै गएँ मलाई यो मूर्खता शिवाय केही लागेन र शिक्षिका बन्ने अठोट गरेँ। स्कुले जीवनले मलाई साह्रै छुन्छ किनकी म आफू नै स्कुले जीवन बिताइराखेकी छु', केही दिन पहिलेको एक अर्न्तवार्तामा उनले भनिन्।
आजभोली बलिउडमा उनकै चर्चा परिचर्चा छ। नहोस् पनि किन, करन जोहर निर्मित फिल्म 'गिप्पी'मा उनले मुख्य भूमिका खेलेकी छिन्। जोहर निर्मित यो पहिलो बालबालिका केन्द्रित फिल्म हो।
हो उनी हुन् १४ वर्षीया रिया भिज। भारतको दिल्लीमा बस्दै आएकी उनी त्यहीँको माटेर डेई नामको स्कुलमा पढ्छिन्। उनकी आमाले एक एनजीओ चलाउँछिन् भने बुबा व्यापारी हुन्।
फिल्म गिप्पीको ट्र्रेलर रिलिज भएसँगै रियालाई खोजी निति गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। उनलाई ट्वीटरमा पछ्याउनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ।
गिप्पीको कथा सोनम नैरले लेखेकी हुन्। फिल्ममा मोटोपना घटाउन डाइटिंग गर्न नमान्ने १३ वर्षे केटी गुरप्रीत कौर (गिप्पी)को कथा छ। मोटो भएकै कारण साथीहरूबाट नरूचाइएकी निराश केटीको रूपमा रियाले गिप्पीको भूमिका खेलेकी छिन्। फिल्ममा किशोरावस्थामा आउने मानसिक र शारिरिक परिवर्तनलाई प्रस्तुत गरिएको छ। साथै किशोरावस्थामा पुगेका छोराछोरी आफ्ना बाबु आमासँग किन निराश हुन्छन् भन्ने कुरालाई फिल्ममा विनोदपूर्ण सरस शैलीमा उतारीएको छ। फिल्ममा रियालाई साथ दिन तहा शाह, दिव्या दत्त, जयाती मोदी र पंकज धिर लगायतका कलाकारहरूले साथ दिएका छन्।
रिया फुर्सदको समयमा पियानो बजाउन र पेन्टिंग गर्न मन पराउँछिन्। आफूले फिल्म खेल्ने कुरा कहिल्यै नसोचेको बताउने उनले हातमा आएको कामलाई त्यत्तिकै छोड्न नहुने बताउँछिन्। फिल्म खेल्नु अगाडी कहिल्यै क्यामेरा फेस नगरेकी उनी फिल्मको अडिसन र सुटिंगका क्रममा नर्भस भएकी थिइन्। 'तर सुटिंग युनिटको रमाइलो वातावरणका कारण पछि आफैँ सम्हालिन्थे', उनले अर्न्तवार्तामा भनेकी छिन्।
रिया वास्तवमा लजालु स्वभावकी छिन्। पारिवारिक जमघटमा लजाउने उनले फिल्म खेलेकै कारण आफ्नो लजाउने बानी हटेको बताएकी छिन्। स्कुलमा उनका साथीहरू पनि बढेका छन्।
रियाले भविष्यमा डेन्टिस्ट बन्ने लक्ष्य राखेकी छिन्। आफूलाई बलिउडको उति साह्रो ठूलो फ्यान नभएको बताएता पनि इमरान खान, रणविर कपुर, परिणीती चोपारा र आलिया भाट उनका मनपर्ने कलाकार हुन्।
आफ्नो अगाडी शररिको तौल र आकारको प्रश्न तेर्साइँदा उनी नर्भस हुन्छिन्। तर फिल्मकी गिप्पी जस्तो साथीहरूबाट नरूचाइएकी भने छैनिन् उनी। रमाइलो कुरा त के भने उनको माटो शरिरकै कारण उनलाई साथीभाइहरूले जिस्क्याउने आँट नै गर्नसक्दैनन्।
फिल्म खेल्नु अगाडि उनलाई लागेको थियो फिल्म भनको रमाइलो खेल हो जहाँ कलाकारले आफ्नो नाच र हिँडाइको चाल देखाउँछन् र चर्चित पनि हुन्छन्। तर जब उनी आफैले फिल्ममा अभिनय गर्न पुगीन् उनले थाहा पाइन फिल्म खेल्नु चानचुने कुरा रहेनछ। यो फिल्म खेलेसँगै अरू राम्रा फिल्म पाएमा उनले अभिनय गर्ने बताएकी छिन्। 'तर त्यसले मेरो पढाइमा बाधा नपुर्‍याओस्', अर्न्तवार्तामा उनले भनेकी छिन्।
किशोरावस्थाकै कुरा गर्दा उनले यस समयमा सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्छिन्। 'यो उमेर भनेको पढाइमा आफै सजग हुने बेला हो। त्यसैले अभिभावकले ज्यादा प्रेसर दिनु हुँदैन। 'किशोरावस्थामा देखापर्ने मानसिक र शारीरिक परिवर्तनलाई सरल रूपमा हेर्नुपर्ने उनले सुझाउँछिन्। उनी आफ्नी आमा र दिदीलाई सबैभन्दा नजिकको साथीका रूपमा लिन्छिन्।
एक्सन फिल्म मनपराउने रिया बास्केटबल खेल्न उत्तिकै रूचि राख्छिन्। फिल्मको पात्र अनुसार उनको अभिनय अत्यन्तै सुहाएको फिल्मकी लेखिका तथा निर्देशक सोनम नैरले बताएकी छिन्। उनको सुन्दर माटो शरिर र अभिनय हेर्न भने आगामी १० तारिखसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ।
वैशाख १२ अघि खचाखच मान्छेहरू देखिने भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा हिजोआज मान्छेको चाप घटेको छ। फाट्टफुट्ट पर्यटकमात्र ओहोरदोहोर गरिरहेका देखिन्छन्। गत बुधवार घरेलु र बाह्य पर्यटक भत्केका सम्पदाहरूको तस्बिर क्यामेरामा कैद...
अपवाद स्थापित गर्ने कसरत
बालबालिकाहरूको अनुहार, बोलीचाली, व्यवहार र औंठाछापहरू अलग–अलग भएझैं रुचि र क्षमता पनि फरक हुन्छ। उनीहरूलाई एकनासले एउटै कक्षाकोठामा राखेर सिकाउन खोज्नु चरा र माछालाई एउटै सिप सिकाउन खोज्नुजस्तै हो।
झम्सीखेल रेष्टुरेन्ट हब
चालीस वर्षअघि ललितपुर युलाखेलका प्रेमलाल रजक झम्सीखेल हुँदै पाटन निस्कन डराउँथे। मकैबारीबीचको सुनसान बाटो पार गर्नु उनका लागि तरबारको धारमा टेकेर हिँड्नुजत्तिकै हुन्थ्यो।साठी वर्षीय रजक अहिले पनि त्यो बाटो भएर...
साउन सकिनै लागेको छ। महिलाहरू हातमा हरिया चुरा, गलामा पोते, हत्केलामा मेहन्दी लगाएर सजिँदै छन्। उनलाई भने अझै 'मध्य असार' छ। रामेछाप ओख्रेनीकी भक्तकुमारी मगर राजधानीमा आएको १२ वर्ष भयो।...
काठमाडौं– सात दिनदेखि सातसूत्रीय माग राखेर अस्पतालमै आमरण अनशन बसिरहेका शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागमध्ये सुरुमा सबैभन्दा कम समर्थन पाएको मुद्दा थियो– डा. प्रकाश सायमीको पुनर्बहाली।...
जगदम्बा जित्ने शब्दहरू जसले ठट्टैमा बैंस बिताए
जगदम्बा–श्री पुरस्कार घोषणा भइसक्दा समेत कवि/गीतकार रत्नशमशेर थापाले पत्तो पाएका थिएनन्। उनलाई खुसीको तात्तातो खबर सुन्नबाट वञ्चित गरिदियो– चोरिएको टेलिफोन तारले। आफ्नै खबर टेलिभिजनको स्क्रोलमा खरर्र कुदेको हेर्न दिएन– लोडसेडिङले।
साढे छ हजारको जुत्ता
२५ अप्रिल २००८ । राति करिब ८ बजे भतिजा कृष्णलाई भेट्न म बोस्टन पुगेको थिएँ । उनले मलाई बोस्टनको साउथ स्टेसनबाट लिएर आफ्नो डेरा एल्स्टन पुर्याए । धेरै वर्षपछि भेट्दा...
बानेश्वर टु यमलोक
मध्य बानेश्वर। संविधानसभा भवन पश्चिमतिरको फुटपाथ। रेजरवायरले घेरेर सुरक्षित पारिएको घेराभित्र थोत्रो लुगा र झुत्रो कुम्लो लिएर बसेको छ, एउटा बूढो। केही कागज–कपडा छन् साथमा। न माग्ने भाँडो छ, न...